Evaru (2019) | MM Movie Store
၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ တလေဂူးအကျရှငျကားကောငျးတဈကားကို မှတျမိကွမှာပါ။ဘာအိုဗာအကျရှငျမှ မပါတဲ့ Goodachari ပါ။ဒီမငျးသားကို ထပျပွီးပွောပွရမယျဆို ဟငျဒီမငျးသားခြော တိုကျဂါး နှဈကွိမျနှဈခါ ပွနျရိုကျခဲ့ပွီး Remakeမြားစှာပွုခဲ့ကွတဲ့ Baaghi ရဲ့ မူရငျး သရုပျဆောငျပါ။
ဒီမငျးသားနာမညျက Adivi Seshတဲ့။ဒီဇာတျကားထဲမှာတော့ ရဲအရာရှိဗဈကရမျနရောက မွငျတှရေ့မှာပါ။ရဲအရာရှိ ဗဈကရမျ အဖွဈမွငျရမယျ့ မငျးသားဟာ ငှအေတှကျဆို ဘာမဆို လုပျမယျ့သူမြိုး၊ရှနေ့တေဈယောကျ မဟုတျပမေဲ့ လူသတျသမားကိုလညျး သူ အကွံကောငျးတဈခြို့နဲ့ ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ ရဲအရှိမြိုး။
အတှေးဉာဏျ၊ဖွတျထိုးဉာဏျ ကောငျးကောငျးနဲ့ သူဟာ လူသတျသမား ဆမျမီရာဖကျက သူဟာ အကွံပေးအဖွဈ ရှိနမှောပါ။အသတျခံရတဲ့ ရဲအရာရှိ(တရားလို)ဖကျကတော့ သကျသတှေေ၊သဲလှနျစတှကေို လုပျကွံတတျတဲ့ ရှနေ့နေဲ့ပါ။နှဈပေါငျး၂၀အတှငျး အိန်ဒိယတောငျပိုငျးမှာ သူလိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ အမှု မှနျသမြှ ရှုံးနိမျ့ဖူးတာမရှိသေးဘူး။
တရားခံဖကျကလညျး လူသတျမှုကို ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျတဲ့ ရဲအရာရှိရဲ့မုဒိမျးမှုအဖွဈ ပွောခငျြနတေယျ။မုဒိမျးမှုကောငျရဲအရှိတဈယောကျကို သတျပဈလိုကျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ အမှုကို ပုံဖျောထားပွီး ဒီအမှုဟာ မှနျကနျမှုရှိမရှိကို ရဲအရာရှိ ဗဈခရမျက စုံစမျးရာမှာတော့…..
အမှုကှငျးဆကျတှနေဲ့အတူ…. ကဲ အပွောငျးအလဲလေးတှရှေိလာနိုငျသေးတော့ ဒီအညှနျးကို ဒီလောကျပဲ ဖွတျမယျဗြို့။————————————-ဒီဇာတျကားကို ဒီလောကျထိ မမြှျောလငျ့ခဲ့တာတော့ အမှနျပါ။ဒီမငျးသားဟာ ဇာတျလမျးရှေးတဲ့ နရောမှာ တျောတယျလို့ဆိုရမယျ။ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသမီးရှေးထားတာလညျး အရမျးတျောပါတယျ။အလိုကျဖကျဆုံးပဲ။
လှညျ့ကှကျတှေ၊မွှုပျကှကျတှကေို ထညျ့ထားပွီး မုဒိမျးကငျြ့လို့ သတျပဈပါတယျလို့ စစခငျြးမှာ ဖျောပွထားတော့ ‘တခွားဘာကိုမြား ဖျောပွနဦေးမလဲ၊ရှဆေ့ကျ ဘယျလိုဖွဈမလဲ’ဆိုတဲ့ အသိက ဇာတျလမျးကို အဆုံးထိ ဆှဲချေါသှားခဲ့တယျ။
အဆုံးပွောခငျြတာကတော့ ဒီမငျးသားဟာ ဇာတျလမျးရှေးတာ တျောသလို ကြှနျတျောတို့လညျး ဇာတျကားရှေးတာ မှနျတယျလို့ ပွောလိုပါတယျ။ဘျောဒါတို့လညျး ဇာတျကားကောငျးကွိုကျသူ၊ အိန်ဒိယဇာတျကားကောငျးတှကေို ကွိုကျသူသာဆိုရငျ ဒီဇာတျကားကွညျ့လို့ နောငျတမရစရေဘူးလို့ အာမခံပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ တေလဂူးအက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားကို မှတ်မိကြမှာပါ။ဘာအိုဗာအက်ရှင်မှ မပါတဲ့ Goodachari ပါ။ဒီမင်းသားကို ထပ်ပြီးပြောပြရမယ်ဆို ဟင်ဒီမင်းသားချော တိုက်ဂါး နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါ ပြန်ရိုက်ခဲ့ပြီး Remakeများစွာပြုခဲ့ကြတဲ့ Baaghi ရဲ့ မူရင်း သရုပ်ဆောင်ပါ။
ဒီမင်းသားနာမည်က Adivi Seshတဲ့။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ရဲအရာရှိဗစ်ကရမ်နေရာက မြင်တွေ့ရမှာပါ။ရဲအရာရှိ ဗစ်ကရမ် အဖြစ်မြင်ရမယ့် မင်းသားဟာ ငွေအတွက်ဆို ဘာမဆို လုပ်မယ့်သူမျိုး၊ရှေ့နေတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ လူသတ်သမားကိုလည်း သူ အကြံကောင်းတစ်ချို့နဲ့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရဲအရှိမျိုး။
အတွေးဉာဏ်၊ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ကောင်းကောင်းနဲ့ သူဟာ လူသတ်သမား ဆမ်မီရာဖက်က သူဟာ အကြံပေးအဖြစ် ရှိနေမှာပါ။အသတ်ခံရတဲ့ ရဲအရာရှိ(တရားလို)ဖက်ကတော့ သက်သေတွေ၊သဲလွန်စတွေကို လုပ်ကြံတတ်တဲ့ ရှေ့နေနဲ့ပါ။နှစ်ပေါင်း၂၀အတွင်း အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာ သူလိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှု မှန်သမျှ ရှုံးနိမ့်ဖူးတာမရှိသေးဘူး။
တရားခံဖက်ကလည်း လူသတ်မှုကို ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တဲ့ ရဲအရာရှိရဲ့မုဒိမ်းမှုအဖြစ် ပြောချင်နေတယ်။မုဒိမ်းမှုကောင်ရဲအရှိတစ်ယောက်ကို သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အမှုကို ပုံဖော်ထားပြီး ဒီအမှုဟာ မှန်ကန်မှုရှိမရှိကို ရဲအရာရှိ ဗစ်ခရမ်က စုံစမ်းရာမှာတော့…..
အမှုကွင်းဆက်တွေနဲ့အတူ…. ကဲ အပြောင်းအလဲလေးတွေရှိလာနိုင်သေးတော့ ဒီအညွန်းကို ဒီလောက်ပဲ ဖြတ်မယ်ဗျို့။————————————-ဒီဇာတ်ကားကို ဒီလောက်ထိ မမျှော်လင့်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။ဒီမင်းသားဟာ ဇာတ်လမ်းရွေးတဲ့ နေရာမှာ တော်တယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသမီးရွေးထားတာလည်း အရမ်းတော်ပါတယ်။အလိုက်ဖက်ဆုံးပဲ။
လှည့်ကွက်တွေ၊မြှုပ်ကွက်တွေကို ထည့်ထားပြီး မုဒိမ်းကျင့်လို့ သတ်ပစ်ပါတယ်လို့ စစချင်းမှာ ဖော်ပြထားတော့ ‘တခြားဘာကိုများ ဖော်ပြနေဦးမလဲ၊ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ’ဆိုတဲ့ အသိက ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်။
အဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဒီမင်းသားဟာ ဇာတ်လမ်းရွေးတာ တော်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း ဇာတ်ကားရွေးတာ မှန်တယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။ဘော်ဒါတို့လည်း ဇာတ်ကားကောင်းကြိုက်သူ၊ အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ကြိုက်သူသာဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားကြည့်လို့ နောင်တမရစေရဘူးလို့ အာမခံပါတယ်။
1987 When the day come